debenture(debenture) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ज्योति विकास बैंकले रु. १.५ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, ज्योति विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने भएको छ । ज्योति विकास बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘९% १० वर्षे ज्योति विकास बैंक बण्ड २०८७’ ऋणपत्र निश्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । बैंकले निश्कासन गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक ९ प्रतिशतको...
इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज फागुन २ गते अन्तिम दिन रहेको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका अनुसार आज दिउँसो बैंकिङ समयसम्म यो ऋणपत्र आवेदन दिन सकिनेछ। बैंक गत माघ १६ गतेदेखि ‘नेपाल इन्भेस्टमन्ट बैंक बन्ड–२०८४’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको ...
इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ। बैंकले गत माघ १६ गतेदेखि ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बन्ड–२०८४ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भनिएको थियो। तर मागअनुसार आवेदन आवेदन नपरेपछि माघ ३० गतेसम्मका आवेदन दिने समय थप गरिएको...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले रु. ७५ करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ७५ करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले ‘सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। यो ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै बैंकले गत माघ ७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। बैंक रु. १ हजार अंकित दरका कुल ७ लाख ५० हजार इकाइ ऋणपत्र...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही माघ १६ गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका ४० लाख इकाइ भएका ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बन्ड–२०८४’ निष्कासन गर्न लागेको हो। यो ऋणपत्रलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत मंसिर १८ गते निष्कासन अनुमति दिएको थियो। बैंकले कुल इकाइमध्ये २४ लाख...
सानिमा बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘सानिमा डिबेन्चर–२०८६’ नामक ऋणपत्र आज बुधबारबाट निष्कासन गरेको छ। सानिमा बैंकले १ हजार दर अंकित कुल ४० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १६ लाख इकाइ सार्वजनिक निष्कासन तथा बाँकी २४ लाख इकाइ प्राइभेट प्लेसमेन्टका आधारमा बिक्री गरिनेछ। सार्वजनिक निष्कासन...
बीओकेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेडले निष्कासन गरेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘बीओके डिबेन्चर–२०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म खरिद आवेदन दिन सकिनेछ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १६ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन...
बीओकेको ऋणपत्र निष्कासन अवधि लम्बियो, अब पुस ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेड १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रको निष्कासन अवधि लम्बिने भएको छ। गत मंसिर २४ गतेबाट निष्कासन भएको यो ऋणपत्रको छिटोमा बिक्री बन्द हुने अवधि मंसिर २८ गतेसम्म भनिएको थियो। तर मागअनुसार आवेदन नपरेपछि अब यो ऋणपत्र निष्कासन पुस ८ गते बैंकिङ समयसम्म खुला गरिने नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ...
बीओकेको रु. १.६० अर्बको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेडले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र आज बुधबार (मंसिर २४ गते) बाट निष्कासन गरेको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘बीओके डिबेन्चर–२०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १६ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। जसमा ६ लाख ६० हजार इकाइ अर्थात कुल ६४ करोड रुपैयाँ ऋणपुँजी रकम (५...
सानिमा बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्र पुस १ गतेबाट निष्कासन हुने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘सानिमा डिबेन्चर–२०८६’ नामक ऋणपत्र पुस १ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ। सानिमा बैंकले १ हजार दर अंकित कुल ४० लाख इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। कुल इकाइमध्ये १६ लाख इकाइ सार्वजनिक निष्कासन तथा बाँकी २४ लाख इकाइ प्राइभेट प्लेसमेन्टका आधारमा बिक्री गरिनेछ।...
बीओकेको रु. १.६० अर्बको ऋणपत्र मंसिर २४ बाट निष्कासन हुने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेडले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र यही मंसिर २४ गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘बीओके डिबेन्चर–२०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १६ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। जसमा ६ लाख ६० हजार इकाइ अर्थात कुल ६४ करोड रुपैयाँ ऋणपुँजी रकम (५...